Imakethe yezimbali zokwenziwa ye-Yiwu itholakala esifundeni sase-yiwu international trade city 1 floor yokuqala.
Imakethe ivulwa ngo-9:00 ekuseni kuya ku-5:00 ntambama.ngemva kweminyaka eyishumi yokuthuthuka kwale makethe, isivele inezitolo ezingaphezu kuka-1000 ezithengisa izinhlobo ezahlukene zezimbali zokwenziwa nezimbali zokwenziwa.
Abaningi babo bancamela ukuthi uthenge isampula kuqala bese udonsa leyo mali kuma-oda akho esikhathi esizayo.Ukuthenga isampula kuvame ukubiza kakhulu kunentengo yewholesale.
Bonke abasizi bezitolo abanabo ubunzima bokucaphuna amanani ngamacalculator abo.Abanye babo bangakwazi ukukhuluma isiNgisi esilula.Kodwa uma ufuna imininingwane eyengeziwe, ungase udinge umhumushi.
Imakethe yezimbali zokwenziwa ye-Yiwu iqinile ngokulingisa okuphezulu, Ikhwalithi ephezulu, izinhlobonhlobo zerayisi lemikhiqizo, intengo ephansi yamukelwe amakhasimende.Imikhiqizo ithunyelwa eYurophu, Middle East, Russia, Southeast Asia, Japan nakwamanye amazwe.Uma ungathanda ukubeka imbali yokwenziwa, izesekeli zezimbali zokwenziwa, imakethe ye-Yiwu inketho yakho.Imikhiqizo yemakethe yezimbali yokwenziwa ye-Yiwu ihlanganisa: i-rose, i-lavender, i-lily, imbali yelanga, i-Calla lily, i-Gerbera, i-Ivy, i-Rattan, i-flower miniscape, i-bonsai encane nezinhlobonhlobo zemikhiqizo.Lapha sinakho okufunayo, Noma ngabe ukubukeka kwenoveli noma ikhwalithi yemikhiqizo.
Ikhwalithi yesevisi ilungile.Namanje sisalele emuva kakhulu emazweni asethuthukile.Ngeke umangale ukuthola abanye abafana benentshisekelo enkulu kumamuvi wabo noma imidlalo yekhompiyutha kunoNKULUNKULU wabo-amakhasimende.